ओलीले घोषणा गरेको चुनाव लड्ने रमेश खरेलको घोषणा, ठूलै नेतालाई दिँदैछन् चुनौती ! – Sandesh Press
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर वैशाखमा तोकेको निर्वाचनको धेरैले विरोध गरिरहेका बेला इमान्दार छविका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले भने समर्थन जनाएका छन्।
उनले वैशाखमा हुने चुनावमा आफूले भाग लिने घोषणा गरेका छन्। एपीवान टेलिभिजनमा पत्रकार समा थापासँगको कुराकानीमा खरेलले ९० प्रतिशत नेताहरु अपराधिक र भ्रष्टाचार पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै तिनीहरुलाई पाखा लगाउन आफू चुनाव लड्ने बताए।
उनले आफ्नो घर काभ्रे भए पनि जुनसुकै ठाउँबाट पनि लड्ने बताए । सबैभन्दा भ्रष्ट टप ५ मध्येको नेतासँग आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने खरेलले जानकारी दिए । ‘पार्टी खोल्न सकेन भने पनि स्वतन्त्र लड्छु।
म हेर्छु नेपाली जनता के चाहन्छन्? परिवर्तन भएका छन्? म मात्रै होइन १६५ क्षेत्रबाटै लड्ने उम्मेदवार हामी बनाउँछौं,’ उनले भने।खरेलले प्रचण्डको चितवन होस वा माधव नेपाल रौतहट लगायत ठूला नेताविरुद्ध लड्ने संकेत गरेका हुन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर वैशाखमा तोकेको निर्वाचनको धेरैले विरोध गरिरहेका बेला इमान्दार छविका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले भने समर्थन जनाएका छन्।
म हेर्छु नेपाली जनता के चाहन्छन्? परिवर्तन भएका छन्? म मात्रै होइन १६५ क्षेत्रबाटै लड्ने उम्मेदवार हामी बनाउँछौं,’ उनले भने।खरेलले प्रचण्डको चितवन होस वा माधव नेपाल रौतहट लगायत ठूला नेताविरुद्ध लड्ने संकेत गरेका हुन्।
Next१३ बर्षीय छात्र र ३४ बर्षीय शिक्षिकाको अनौठो प्रेम कहानी !